မန္တလေးတွင် မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပါက စည်ပင် အထူးတရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုသွားမ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားများ မြို့တော် စည်ပင်သာယာဥပဒေပါ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ ပြင်ဆင်သစ်မှတ်ထားသော စီမံခန့်ခွဲရေးပြစ်ဒဏ်၏ ဒဏ်ကြေး ငွေနှင့်အတူ စည်ပင်အထူးတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုအရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ထုတ် ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအရသိရသည်။
”မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီခွင့်ပြုချက်နဲ့အခုလိုမျိုး ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ပြစ်မှုနဲ့အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကော်မတီပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) ဒဏ်ကြေးငွေကိုအနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သောင်းကနေ အများဆုံးကျပ် ငါးသောင်းအထိပဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သောင်းကနေ အများဆုံးကျပ်ငါးသိန်းအထိဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းရှိလာစေဖို့သာ အဓိကပါ။ တချို့တွေက အရင်ဒဏ်ကြေးကို သိပ်အလေးမထားဘဲစည်း ကမ်းဖောက်ဖျက်တာတွေရှိလို့ ဒဏ်ကြေးကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရတာပါ။ ပလက်ဖောင်းတွေကို ဖျက်စီးတာနဲ့ လမ်းပေါ်ကိုဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကျုးတာမျိုးသာ ဒဏ်ကြေးက ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ပြင်းထန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကျန်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေအတွက် တော့အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိပဲချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဇောအောင်က စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်း နယ်နိမိတ်တွင်ပါဝင်သည့် မြို့နယ်ခြောက် မြို့အတွင်း ကော်မတီမှသတ်မှတ်ထားသော လမ်းစည်းကမ်းများနှင့် လမ်းအသုံးပြုမှု စည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်မှုရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များဖြင့် မြို့နယ်အလိုက်နေ့ စဉ်ကွင်းဆင်းဖမ်းဆီး အရေးယူလျက်ရှိပြီး ကျုံးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပလပ်စတစ်အမှိုက်ပုံးများ မြို့တော်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် အသုံးပြုထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ကန့်သတ်ထားသော ရေမြောင်းများ နှင့်ချောင်းတို့တွင် အမှိုက်ခိုးပစ်သူများနှင့် လမ်းများအောက်ရှိ ရေဆိုးမြောင်းဝင်ပေါက်၏အဖုံး (Manhole)များကိုခိုးယူသူများကိုလည်း ယခုပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲရေးပြစ်ဒဏ်ကြေး ဖြင့် တပ်ရိုက်ခြင်း၊ စည်ပင်အထူးတရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ခြင်းတို့ ဖြင့် ထိရောက်စွာအရေးယူသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှသိရသည်။
မြို၊ ခမီနှင့် ဒိုင်းနက် လူမျိုးများအတွက် တိုင်းရင်းသား စာပေသင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု ဆရာမျ??
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများအသင်းခ